IINDAWO EZINGAMA-30 EZIMANGALISAYO EKUFUNEKA UNDWENDWELE NGAPHAMBI KOKUBA UFE - INDLELA YOKUPHILA
Iindawo ezingama-30 ezimangalisayo ekufuneka undwendwele ngaphambi kokuba ufe
Nokuba sele sihambe kangakanani, okanye zingaphi iindawo esiye kuzo, sihlala silambele ezinye.Ihlabathi liyindawo enomdla, kwaye kusisono ukungahambi, hayi ukujonga.
Nalu uluhlu lweendawo ezimangalisayo ezingama-30 kwihlabathi liphela ekufuneka uzindwendwele ngaphambi kokuba ufe-uluhlu lokugqibela lwamabhakethi:
1. ITrinidad, eCuba
Idolophu yaseCuba ethandekayo kwingingqi esembindini yeyona ndawo ithandwayo kakhulu kubakhenkethi kumashumi eminyaka ngoku. Kwi-1988, ibhengezwe njengendawo yelifa le-UNESCO. Umfanekiso uthetha yonke into; Ilifa lenkcubeko elithandekayo, ukutya okumnandi, kunye nolwandle olothusayo lweCaribbean ziimpawu zale ndawo inomdla. Zininzi izinto ekungafuneki ziphoswe Iindawo ezinika umdla zotyelelo eTrinidad . U-Sodolophu wePlaza, zombini iplaza kunye nemyuziyam evulekileyo yoyilo loyilo lwaseSpain lolokuqala phakathi kwabo.
2. IBeijing, China
Uluhlu lwamabhakethi omhambi alunakugqitywa ngaphandle ikomkhulu lase China . Isixeko sasiyindawo yokuhlala komlawuli waseQing naseMing; qiniseka ukubandwendwela. Sisityebi ngamatye ezikhumbuzo zembali nezenkcubeko, esi sixeko sitsalela abakhenkethi abaninzi. IsiXeko esingavumelekanga, i-Great Wall yase China, iTempile yaseZulwini, iMing Tombs, kunye neBeijing Opera edumileyo, iya kukugcwalisa nge-ave kunye nentlonipho yenkcubeko yakudala yaseTshayina.
3. Yerusalem, Sirayeli
Esinye sezona zixeko zidala emhlabeni, iJerusalem ithathwa njengengcwele ziinkolo ezininzi. Imbali yamandulo ingabonakala kwiindonga zamatye zaseYerusalem; izakhiwo ezinkulu, iindawo zelifa lemveli kunye neempawu ezimangalisayo zenkcubeko, ukholo kunye nembali. A ukhenketho lweSixeko esiDala saseYerusalem Kunyanzelekile kuba le ndawo inembali kunye nelifa lemveli.
IsiXeko esiDala likhaya loDonga lwaseNtshona, iCawa yeSingcwele Sepulcher kunye neNtaba yeTempile. Ukhenketho oluququzelelweyo luya kukukhokela kwimbali yoluntu kunye nokholo eJerusalem, ngamava nje okwexeshana.
4. IVienna, eOstriya
Ikomkhulu kunye nesona sixeko sikhulu eOstriya, esidume ngeziza zamafa e-UNESCO, iSchonbrunn Palace, iindawo zokutya, iikeyiki kunye neebargains. Ukuya amava eVienna inyaniso, uya kudinga iinyanga; amabhotwe, ezikhumbuzo, iipaki, kunye nezinye izinto ezinomtsalane ziya kukwenza uthandane nesi sixeko. Phakathi kwabanye abaninzi, eVienna kufuneka undwendwele:
Idolophu elikomkhulu laseMexico, elinabantu abazizigidi ezingama-21,2, lihlelwa njengesiXeko seAlfa seGlobal esithetha ukuba lelinye lawona maziko abalulekileyo emali eMelika. Umntu unakho hlola iMexico ebomini kwaye awukayazi yonke. Siza kukhankanya ezinye zezinto ezinomdla onokundwendwela:
IPlaza de la Constitución okanye iZocalo
6. EMelbourne, eOstreliya
Isixeko sesibini ngobukhulu e-Australia, amatyeli aliqela avota phakathi kwabona bathathu baphambili kwesona Sixeko sinoLiviyo kuluhlu lwehlabathi. Ikalwe kakhulu kwimfundo, ukonwaba, ukhathalelo lwempilo, ukhenketho, kunye nemidlalo, iMelbourne itsalela abantu abavela kwihlabathi liphela ukuba bayindwendwele kwaye bayithande, kunye nokungena.
Iindawo ezinika umdla zotyelelo ukutyelela :Intengiso
Intengiso yeQueen Victoria
7. IVerona, e-Itali
Esinye sezixeko ezithandekayo kwihlabathi, iVerona, ikhanya ngokuqaqambileyo kuMlambo iAdige. Ngaba ulivile ibali malunga noRomeo noJuliette? Kwenzeke apha, eVerona. Indlu kaJuliette - iCasa di Giulietta ngokufuziselayo imele eli bali libuhlungu lothando. Unokuza kwibhalkoni eyaziwayo, kwaye uthinte isifuba somfanekiso kaJuliette; inkolelo yakudala kukuba ukuchukumisa isifuba sakhe kuya kukuzisela ithamsanqa kubomi bothando.
Ngaphandle kolu tsalo ludumileyo, zininzi ezinye eVerona : iAriyna yaseRoma, apho ungangqina khona ngomdlalo opera omangalisayo, iMyuziyam yeArchaeological, kunye neqonga laseRoma. Uluhlu luyaqhubeka kwaye luqhubeke, njengoko esi kufuneka-sityelele isixeko sakha kuluhlu lwethu lwebhakethi lokugqibela.
8. ILuxor, iYiputa
Idume ngeyona ndawo inkulu inemyuziyam evulekileyo emhlabeni, iLuxor ngumxube wesixeko sanamhlanje kunye namabhodlo esixeko samandulo iThebes, ikomkhulu lase-Egypt ngexesha lika-Amon-Ra. Izikhumbuzo zamandulo ezinkulu zitsala amakhulu amawaka abakhenkethi yonke imihla; Enye yezona ndawo zinomtsalane yintlambo yooKumkani, equlathe ingcwaba likaFaro Tutankhamen. Enye Isizathu sokundwendwela esi sikhumbuzo siyimbali sisakhiwo seLuxor Temple ethe yadilika kancinci phantsi koxinzelelo lwexesha.
Ngelixa undwendwele i-Egypt qiniseka ukujonga iTempile yaseKarnak, iSouks (okanye iMarike), kunye neMedinat Habu.
9. IKrakow, ePoland
Esinye seyona dolophu indala kunye neyesibini ngobukhulu ePoland, iKrakow idume ngokuphuhla kakuhle kwezemfundo, kwinkcubeko nakubomi bobugcisa. Abathandi bokwakha baya kuqhuma eKrakow; le dolophu ineendlela ezininzi zokwakha ezahluka-hlukeneyo. Uninzi lwezakhiwo zamatye ezikhumbuzo zedolophu yakudala zinomtsalane kubakhenkethi abaninzi: iCmentarz Rakowicki, iioases zeSkalki Twardowskiego kunye neZakrzowek, iSaint Mary's Basilica nokunye okuninzi.
Ungayithanda imbonakalo emangalisayo evela kuKopiec Kraka ejonge esixekweni, uthathe uhambo lokuphumla eWisla Boulevards, kwaye wonwabele amagcisa kunye nabadlali kwi-Main Square. IKrakow yindawo ekumele undwendwele kuyo kubahambi banamhlanje.
10. eRhawutini, eMzantsi Afrika
Esona sixeko sikhulu eMzantsi Afrika, Rhawutini Ikomkhulu lephondo laseGauteng, elilelona licebileyo eMzantsi Afrika. Ngaphambili besisaziwa njengesiXeko seGolide kwimbali yaso etyebileyo njengesiXeko saseGold Reef, isixeko sakhula ukusuka kwidolophu yezemigodi yemizi-mveliso ukuya kwindawo ephucukileyo yemisebenzi yokwakha, uluhlu olubanzi lwenkcubeko kunye nokhenketho, kunye nomoya wedolophu. Jonga iCradle of Humankind, indawo yelifa lemveli ekhuselweyo yi-UNESCO, ndwendwela ezinye iigalari, okanye iMyuziyam enkulu yobandlululo. Zama ukutsiba nge-bungee ukusuka kwiinqaba ezimbini zokupholisa ezishiyiweyo, zipeyintwe ngamagcisa awonga oonyana neentombi zaseSoweto.
11. IBagan, eMyanmar
Isixeko samandulo esiseMandalay kwingingqi yaseBurma, eMyanmar yindawo enobuntu ehlabathini, apho umntu anokutyelela iitempile ezintle kwaye ayithande inkcubeko kunye nelifa lemveli laseBurma. Kwimbali yayo etyebileyo, iBagan yasinda kumakhulu-khulu eenyikima, kunye neemfazwe ezininzi, uninzi lweendawo zembali zingamabhodlo, kodwa kusekho izinto zokugcina ezigciniweyo kunye neendawo ezinobungqina bembali etyebileyo yaseBurma.
xa indoda ifuna ukukutshata
Ndwendwela ii-stupas ezininzi eBagan , ii-pagodas, kunye neemyuziyam, zamkela indalo ngendlela eyiyo. IBagan yindawo ekufuneka uyityelele kuyo nayiphi na indlela yohambo.
12. ISeville, eSpain
Nabani na otyelele iAndalusia angangqina ngeminyhadala yaso enemibala kunye nenomdla, uyilo oluhle, iindawo ezinkulu zembali, kunye nokutya okumnandi, imivalo kunye nomoya wobusuku. Nokuba ungakanani, nokuba unomdla ngantoni, I-Sevilla yindawo yokhetho lomntu kunye nokukhetha kwakhe . ICathedral enkulu, iReales Alcázares Palace, kunye nenkunzi yenkomo edumileyo kumabala emidlalo ngamava ongafanele uphoswe kuwo.
12. Petra, eJordani
Enye indawo yelifa lemveli ye-UNESCO, indawo eyaziwayo yezinto zakudala, eyahlukileyo kwifom yamatye kunye nendalo. UPetra inomtsalane kubakhenkethi abaninzi minyaka le, abaza kutyelela isiza bencoma ulwakhiwo olukhulu oluqingqiweyo elityeni, kunye nenkqubo edume ngokuhambisa amanzi. Le yindawo apho inkcubeko yaseArabia idibana khona neendlela zamaGrike. Le ndlela inqamlezileyo iphakathi kweArabia, i-Egypt neSyria yaziwa ngegama lesiXeko esiBomvu okoko isakhiwo esikhulu samatye sakhiwe ngesiqingatha-senziwe kwilitye elibomvu.
Wonke umhambi kufuneka atyelele esi sikhumbuzo sikhulu senkcubeko kunye nembali eJordani. Ingcwaba elingaphantsi kwesakhiwo likhulu, liqukethe amacandelo aliqela; Ingcwaba lebhotwe, ingcwaba laseKorinte, Khasneh, kunye neUrn Tomb. Kuba esi sakhiwo siyabola kancinci, kuluhlu lokundwendwela ngokuqinisekileyo ngelixa lusenokwenzeka.
14. ILas Vegas, e-USA
I-dessert ye-Nevada yayingeyondawo inomdla kangako kude kube ngo-1931. Ukusukela ngaloo nyaka, iiholide ezininzi, iihotele, iikhasino, iindawo ezinkulu kunye nezinto zokuzonwabisa zaqala ukubonakala ngokukhawuleza, zakha Las Vegas njengeziko lokuzonwabisa, ukonwaba kwazo zonke izivamvo, kunye nokubaleka kubomi obuqhelekileyo nobukruqulayo. Ukudubula okukhawulezileyo kwesixeko kuyiguqulele ekubeni yindawo enkulu kunye ne-megalopolis enkulu, enabantu abangaphezulu kwezigidi ezi-2 (ngo-2014), kwaye uninzi lwezinto ezinomtsalane ziheha abakhenkethi abazizigidi ezingama-40 ngonyaka.
Kule ndawo iyothusayo, kukho ukuphinda yonke imimangaliso yehlabathi, iindawo ezinomtsalane zabakhenkethi ezivela kwihlabathi jikelele; phakathi kwamawaka ezinye izinto ezinomtsalane apha kufanelekile ukuba ukhankanywe:
I-Bellagio complex - Inkulu kwaye iyaziwa kwihlabathi lonke kwiihotele, kwiindawo zokungcakaza zokungcakaza kunye nezinto ezinomdla. Imithombo kufanelekile ukuba ikhankanywe.
I-Cirque du Soleil -imidlalo emangazayo kunye nomxube weqonga lobugcisa kunye nokuzonwabisa esitratweni
ENew York -I-New York Roller Coaster-uphawu lwe-cab-efana ne-roller coaster iya kukuqhubela kwiNew York Hotel naseCasino
ICityCenter -ingomso wexesha elizayo wakha ihotele enezi mini kunye nefuthe leevenkile ezinkulu kunye noyilo lwekamva
IsiMandarin saseMpuma- iyothusa ihotele eyakuthatha umphefumlo wakho
15. IVaranasi, eIndiya
Eyaziwa ngokuba yiKashi - isiXeko soBomi, esi sesinye sezona zixeko zidala zehlabathi kwaye sesinye sezixeko ezisixhenxe ezingcwele zamaHindu. Le yindawo ongazange uyibone ngaphambili. Umlambo iGanges uthathwa njengongcwele, kwaye ukuhlamba nokuntywila kuwo kubonakalisa ukuzalwa ngokutsha kwendoda, kuhlanjwa zonke izono.
Amaxesha amaninzi achazwa njengemilingo, i-rustic, kunye nendawo enamandla angakholelekiyo; Varanasi asiyondawo yabantu abantliziyo zityhafileyo. Umntu unokufumana amasiko awodwa, amasiko angaqhelekanga, kunye neempembelelo ezinobundlongondlongo, ezinokuthi ngamanye amaxesha zingonwabi kwaye zoyikise.
Ngoyilo olunomtsalane, iindawo ezinkulu zembali, kunye namava ngokubanzi esixeko saseIndiya esisesibhakabhakeni. E-Varanasi uza kubona i-ghats yemveli, iitempile ezininzi zamaHindu, ukukhwela isikhephe kwiiGanges ezinamandla, kwaye ukhenketho oluninzi ngokuqinisekileyo luya kuba lolunye lwamava alungileyo.
16. IDubrovnik, eCroatia
Idolophu yakudala yaseDubrovnik lilitye elinqabileyo loLwandle iAdriatic, enye yezona ndawo zityelelekileyo kwilizwe lonke laseCroatia. Izitalato zeemarble zerustic kunye nezakhiwo ezoyikekayo ezakhiwe ngohlobo lwe-baroque zikhuselwe ziindonga zamandulo ezikhusela isixeko kangangeenkulungwane.
IiMyuziyam zibonisa le dolophu inembali ende; Iimonasteri zaseRustic zibalisa ibali lezorhwebo elinekratshi kwiMeditera, latshatyalaliswa ngebhombu ngo1991, kodwa isixeko esakhiwe ngokutsha saye sanqoba saza saba ngumtsalane kubakhenkethi ekufanele ukuba songezwe kuluhlu lwamabhakethe akhe nabani na. Jonga iDubrovnik ‘Iindonga ezinkulu neziphakamileyo, ndwendwela igalari yezeMfazwe, undwendwele iCathedral yoNyuko, kwaye uthathe intambo yokukhwela ukusuka esixekweni uye kwiNtaba yeSrđ ukuya kumlindi apho uya kuwuthanda umbono omangalisayo.
UMantla weThailand yindawo entle. Kwaye apho uya kungqina indalo njengakwezinye iindawo. Iincopho zeDui Suthep-Pui National Park zijikeleze i-1700 yeemitha ukuphakama. Lo mmandla uqulethe malunga neetempile ezingama-300 zamaBuddha, uninzi lwazo luvaliwe kubakhenkethi; ezivulekileyo zikhangeleka zikhwankqisa, zinezakhiwo ezinkulu, imihombiso, uphahla oluhonjiswe kakuhle kunye neentsimbi ezinkulu. Chang Mai ngumxube wale mihla kunye nangaphezulu; Indawo yanamhlanje yesixeko iyaphila kwaye igcwele ubugcisa bale mihla, kwaye iindawo ezindala zirustic-ziphinda zenze imbali etyebileyo yeChang Mai. Le ndawo izakuxhokonxa iingqondo zakho, ivuse imeko yakho yokomoya engaphakathi, kwaye ivuselele ubomi bakho ngaphakathi.
Iziphumo zokungaseli manzi
18. EMoscow, eRashiya
Ikomkhulu laseRussia liyothusa; isixeko lelinye lawona mazwe anamandla emhlabeni ngaphandle kwamathandabuzo sikhuthaza ukunconywa. Ukusuka kubugcisa, kumzi-mveliso nakwezomkhosi, kwiziseko zophuhliso nakubusuku bobusuku, IMoscow yindawo yamandla , i-megalopolis enendawo yeemfuno zomntu.
Phakathi kwezinto ezininzi ezinomtsalane, ngokuqinisekileyo kufuneka batyelele iindawo eMoscow zezi:
Kremlin & Red Square - isiseko somzi kunye nelizwe. (Ukongeza - iSt Basilic's Catedral ngoku eyimyuziyam yokomfuziselo)
Icawa kaKristu uMsindisi - icawa yobuOthodoki yamaKristu amade ehlabathini.
Ipaki yaseGorky - ipaki yolonwabo eyaziwayo, ethiywe ngegama likaMaxim Gorky
I-Bolshoi Theatre-eyaziwayo Imbali yeqonga
IVysotki - oodade abasixhenxe - iqela labasixhenxe abadumileyo
19. I-Edinburgh, eScotland
Inkunzi yaseScotland ayiyi kukushiya i-phlegmatic ngokuqinisekileyo. Ifunyenwe kunxweme olusemazantsi, iintaba-mlilo kunye namakhephu omkhenkce abumba le ndawo. Uyilo olunomtsalane kunye nemfundo ehambele phambili yenza i-Edinburgh ibe sisixeko esinqwenelekayo kubatyali abancinci bezemfundo.
Inkcubeko etyebileyo kunye nokubona indawo okumangalisayo ayisiyomtsalane kuphela enokukutsalela kuyo Ndwendwela i-Edinburgh . Ukutya okumnandi, uninzi lweendawo zokutyela ezikumgangatho wehlabathi kunye nee-pubs ezaziwayo zehlabathi zaseScotland ezineebhegi zeebhiya kunye ne-whisky ebonelela ngokonwaba kuwo wonke umntu. Umntu ngekhe aphosise ukwahlula i-Edinburgh njengesixeko esikhulu sasebusuku; ukuphuma ebusuku kungaphela kusasa ngomso ngokulula.
Ukutyelela i-Edinburgh akufuneki uphoswe zezinye zezi:Intengiso
Igalari yeSizwe yaseScotland
Umbono ovela kwiNqaba yase-Edinburgh
Hlamba ubuso bakho kumbethe weSitulo sika-Arthur, incopho kwiqela leenduli eScotland
IHolo likaKumkanikazi-indawo enkulu yomculo
20. ICagagena, eColombia
Esinye isixeko selifa lemveli esikhuselweyo se-UNESCO, apho umxube weendonga zamatye ezindala kunye nolwakhiwo ludibanisa ne-cityscape yale mihla; apho kugcinwa inkcubeko yakudala kwaye iboniswa ngokuhlaliswa kwamakoloniyali ukusuka kwilizwekazi lakudala laseMelika.
IsiXeko esidala saseCagagena siyabakhuthaza abahambi; Izitalato ze-rustic colonial kunye nezakhiwo ezigciniweyo zijikelezwe ngeLas Murallas, iindonga ezinkulu. Umoya weSan Diego kunye no-El Centro oxinaniswe ngamabhotwe, kwaye iiplaza zekoloniyaliya kushiya umbono oqinisekileyo kubo bonke abahambi.
Kuya kufuneka utyelele eCartaggena :
Inqaba iSan Felipe - inqaba yomkhosi edumileyo eneetonela eziphantsi komhlaba
I-Totumo Volcano -udaka lwentaba-mlilo, oludumileyo ngesityholo salo sokuphilisa udaka
Iklabhu yeNavy - iklabhu yemidlalo eyaziwayo eyonwabisayo esekwe ngamagosa asemanzini
Indlu yeqela leWaveflow - indlu yeeklabhu ene-surf simulator
ICathhedral yaseSt.Catherine yaseAlexandria
21. ITokyo, eJapan
Ekunyukeni okungaguqukiyo, iTokyo yagqitha kwiidolophu ezininzi kwimpumelelo yoyilo, uguquko kumzi mveliso, uphuhliso kunye nolondolozo lwenkcubeko. Inkcubeko yeKaizen iyasebenza; Esi sixeko ngumzekelo ogqibeleleyo wenyathelo elinye ukuya kwinkqubela phambili, yonke imihla yendlela. Lo mfanekiso uxela ngaphezu kwewaka lamagama, ubonakalisa uyilo lwe-neon yamva nje yesibhakabhaka saseTokyo.
I-Tokyo iphinde igcine ifa lemveli kunye nelifa lemveli, ukusuka kumaxesha akudala xa le yayihlala i-shogun eJapan. Isiko ligcinwa kumlo we-sumo, i-handcraft, kunye neendlela ezincinci kunye neethala leplanga kwiiyadi ezineentyatyambo ze-cherry.
Izinto ongaziphosiyo eTokyo :
IKoishikawa Kōrakuen - enye yezona gadi zindala nezona zibalaseleyo zaseJapan eTokyo. Yakhiwa ekuqaleni kwexesha le-Edo (1600-1867)
Indawo yaseYasukuni - yamaxhoba emfazwe kwisiseko soxolo lwaseJapan lwanamhlanje
I-Zojoji Temple -Ithempeli laseJapan lobuBuddha, umzekelo onqabileyo woyilo lokuqala lwe-Edo.
Umthi wesibhakabhaka waseTokyo-iipanorama ezinomtsalane zesixeko siphela zinokubonwa kule nqaba iphakamileyo eyi-650m
22. IVancouver, eCanada
Uluhlu lweendawo ezintlanu zokuhlala emhlabeni, IVancouver unikezela indawo yakhe wonke umntu. Uluntu olunobubele kwi-Eco, izangqa zasezidolophini zobugcisa, umculo, kunye nenkcubeko, ukutya okuneenkcubeko ezininzi, iithiyetha, iimyuziyam kunye neopera ziyinxalenye nje encinci yesi sixeko simangalisayo. Uphuhliso loshishino kunye nobomi benkampani zizinye zezizathu ezininzi abantu abaninzi beza eVancouver ukuqala ubomi obutsha.
Iindawo ongaziphosiyo eVancouver:
IStanley Park - inkulu kwaye iyaziwa ehlabathini
Igalari yezobugcisa-imiboniso esembindini yenkcubeko kunye nezobugcisa zenzeka apha
Inzululwazi yeHlabathi kwi-TELUS yeHlabathi yezeNzululwazi-ukulahla umhlathi kwimiboniso yesayensi ephilayo, kunye neefilimu zetekhnoloji ye-OMNIMAX yenye yamava alungileyo.
Ukujonga-kwibhodi ephezulu engama-50, ikheshi igqibezela indlela ukusuka ezantsi kwimizuzwana engama-50. Umbono omangalisayo.
23. UZakynthos, eGrisi
Isiqithi esincinci kuLwandle i-Ionia, eGrisi, siye saba yindawo yabakhenkethi kule minyaka idlulileyo, isizisa amakhulu amawaka abatyeleli minyaka le. Ukukhanya kolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka, ubomi obumnandi bobusuku, ukutya okumnandi zizinto zesi siqithi. Ngobunewunewunewu obuthandekayo, indawo yokufihla izilwanyana efana nezilwanyana, kwaye yenye yeelwandle ezifotwe kakhulu emhlabeni, iZakynthos-Zante inikezela ngemozulu efudumeleyo yasehlotyeni kunye nezinto ezininzi ezenzelwe ukonwabela iindwendwe.
Ukuba ne iholide kuZante , Akufanele uphoswe koku kulandelayo:
Ulwandle lwaseNavagio (lubonisiwe) / Ulwandle lwaphukelwa yinqanawa
Imiqolomba eBlue - amanzi amnandi aluhlaza ajikeleze imiqolomba emhlophe emhlophe, ibonakalisa kwaye ikhanyisa eyona ndawo imangalisayo ngokundwendwela
Isiqithi saseMarathonisi-siqithi esijongeka ngathi ngufudo, apho iTaretta-Caretta turtle eyayibeka amaqanda kuyo
Idolophu yaseZante-indawo ephambili kunye nesixeko esiphuhlileyo kuphela kwesi siqithi
Icawa yeAgios Nikolaos
24. UMaui, eHawaii
IMaui sisiqithi esiseHawaii, e-USA, kwindawo yesibini ngobukhulu elizweni. Iilwandle ezithandekayo kunye nePacific eluhlaza okwesibhakabhaka engapheliyo iya kukumkela ngendlela yesiHawaii: iAloha egxininisayo! kunye nentyatyambo i-Lei entanyeni yakho, efanekisela umoya we-aloha kunye nobubele buyamkela.
Iiholide eMaui inokupakishwa amanyathelo, iphonononge okanye ijike; konke kuxhomekeke kuwe. Kwiintlobo ze-adventure, kukho iindlela zebhayisekile, ukusefa, ukuhamba intaba kunye nekayaking. Njengomphandi, uza kubona iingxangxasi ezininzi ezimangazayo, ngamava nje okukodwa ebomini. Kwaye ukuba uphumle ukuze uphumle kunye nee-cocktails ezineeambrela ezintle, ulwandle olonwabisayo luya kuqinisekisa ukubamba eyona ndlela ibalaseleyo, ukubonelela ngendawo yokuhlala, yokutyela, kunye neatmosfera.
Zininzi izinto ezinomdla onokuzityelela eMaui, kwaye nazi ezinye zazo:
IMolokini Crater - ukhenketho lwalo mmandla mdala wentaba-mlilo lwenzeka mihla le
IKula Botanical Garden -amawakawaka eentyatyambo kunye nezityalo, ezinendawo entle
IPaki yeSizwe iHaleakalā -ukuhlola intaba-mlilo, izilwanyana zasendle ezimangalisayo ukutyelela
Zama i-snorkeling -ukuphila okumangalisayo kwaselwandle kunye namanzi acwecwe ngekristale afanelekileyo kulo msebenzi
25. IReykjavik, eIceland
I-Iceland yindawo engenakuchazwa ngamagama kuba ambalwa amagama afanelekileyo athi qatha engqondweni xa ucinga ngesi siqithi kulwandle lwaseNorway. Ukuma komhlaba wentaba-mlilo yeegiza, imithombo eshushu, iingxangxasi, amagqabaza omkhenkce kunye nonxweme olunesanti emnyama kuyamangalisa. Isixeko esilikomkhulu, Reykjavik , yindawo etyebileyo ngobomi, inkcubeko, kunye namandla eNordic.
Akukho nje ubuhle bendalo obothusayo obuchukumisayo; Inkcubeko etyebileyo yase-Iceland, imbali yasentsomini yeNordic, kunye nabantu base-Iceland baya kothusa wonke umntu otyelele eli lizwe lingakholekiyo. Le yindawo apho uzakubukela khona ukukhanya okumangalisayo kwe-Aurora Borealis Northern Lights kumthombo wamanzi ashushu ashushu kunye neqondo lobushushu elijikeleze i-zero Celsius.
Nazi iindawo ekufuneka uzindwendwele e-Iceland, phakathi kwezinye ezininzi:
IGullfoss - ingxangxasi eyothusayo
IHolo yeKhonsathi yeHarpa eReykjavik
IBlue Lagoon-iGeothermal Spa
Icawa yaseHallgrímskirkja eReykjavik
26. ISri Lanka
ISri Lanka yindawo yabakhenkethi eyaziwayo phakathi kwabakhenkethi abafuna iholide ezikhuthazayo ngexabiso lexabiso. Iindawo zelifa lemveli ze-UNESCO ezazime kuvavanyo lwexesha iminyaka engama-2000 kunye nezilwanyana zasendle ezimangalisayo zizizathu ezifanelekileyo ngokwaneleyo ukuba zingandwendwela eli lizwe lihle.
Jonga amahlathi emvula xa ufuna ukusuka kubushushu kunye neelwandle, utyelele izilwanyana zasendle kwiipaki zesizwe, ufumane iitempile ezininzi ezinomtsalane, ukhwele ilitye elidumileyo leNgonyama, kwaye uthande iimyuziyam phakathi kwezinye Umtsalane eSri Lanka .
27. IKapa leThemba eliHle, eMzantsi Afrika
ICape of Good Hope yindawo emangalisayo, apho umntu anokonwabela iiholide ezintle kwindawo engaqhelekanga, ikhaya lendoda ebhabha eDatshi. Kukho indlela yokunyuka intaba ebandakanya indawo yokukhanya endala, ivenkile yesikhumbuzo ngelixa unikela ubungqina obothusayo bendalo apho kuhlangana khona izithuba ezibini - i-Indian kunye ne-Atlantic Ocean. Ukutyelela iKapa leThemba eliHle ngamava awodwa anomdla, apho ungafunda malunga ne-250 yeentaka ezahlukeneyo ezizinze eKapa, ​​kunye neentyatyambo ezingaqhelekanga zaseMzantsi Afrika.
28. IGrand Canyon, eArizona
Ummangaliso wendalo, i IGrand Canyon stuns iliso kwimbono yokuqala. Ngaphezulu kweekhilomitha ezingama-450 ubude beCanyon eqoshwe ematyeni nguMlambo iColorado. Le ndawo yokuhla kwemihlathi itsala amakhulu amawaka abakhenkethi minyaka le, ukuze babuke indalo enomtsalane.
Ungasondela eCanyon kwiindawo ezininzi, zonke zahlulwe zangamacandelo amathathu eendawo: uMzantsi, uMntla, neNtshona. Zonke zibonelela ngamava ahlukeneyo kunye ne-engile yesakhiwo esikhulu. ISouth Rim yeyona ityelelw kakhulu, kwaye iNtshona idume ngeSkyline yayo enomtsalane, eyakhelwe emaphethelweni ebhulorho yeglasi enempikiswano kubume be-U.
29. Isiqithi se-Easter
Isiqithi esincinci kwiPolynesia Triangle, the Isiqithi se-Easter , Idume ngemifanekiso eqingqiweyo engama-900 ebizwa ngokuba yi-Moai, eyenziwe ngookhokho abahlala apha ngonyaka we-1200 CE. La manani aqoshwe kumatye entaba-mlilo kunye nothuthu lwentaba-mlilo. Imvelaphi yabo ibalisa ibali lenkolelo yasePolynesia ngobungcwele bentloko. Ukusuka encinci, ukuya kubukhulu obukhulu, imifanekiso eqingqiweyo ithe saa kwisiqithi sonke. Ukuphonononga inkcubeko yasePolynesia, kunye nokufunda malunga namaqonga amatye kunye nemifanekiso eqingqiweyo kuya kuyenza iholide yakho ibe yodwa kwaye ibangele umdla.
Nazi iindawo ezithile onokuzongeza kuhambo lwakho:
IRano Kau Intaba-mlilo
30. UTaj Mahal-Agra, waseIndiya
Okokugqibela kuluhlu lwethu kodwa kungaphelelanga apho., UTaj Mahal waziwa kakhulu njengegugu lobugcisa bamaSilamsi eIndiya olwakhiwe ngembeko yothando kunye nosizi luka-Shah Jahan’s ngomfazi wakhe amthandayo, inkosazana yasePersi, uMumtaz Mahal. Eyakhelwe ngo-1653, kwathatha amagcisa angama-20 000 kunye neminyaka engama-21 ukuyigqiba. Indawo enkulu yokwakha emarmore emhlophe embindini wenkomponi, ijikelezwe ngamangcwaba, iigadi kunye neenqaba; yabhengezwa njengendawo yeLifa leMveli le-UNESCO ngo-1983. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukutyelela eli hlabathi kule minyaka imbalwa izayo ngenxa yamarhe okuwohloka kwalo nokuba kunokwenzeka ukuba livale iindwendwe.
Yeyiphi indawo okhe wayindwendwela? Yeyiphi oyithandayo? Sazise!
imisebenzi ehamba kancinci yoxinzelelo
andazi ukuba uze kwenza ntoni
izinto ezingenziyo kubudlelwane
izinto zokwenza xa udikwe zihlobo
Abahlobo Ukuphumla Kokulala Ingqondo Ubomi Ukukhulelwa Njengomzali 2